Ballanqaadkayaga wuxuu u dirayaa NCS Sheffield - Element Society
Ballanqaadkayaga NCS Sheffield
BURNIINKA KU DHASHO SHARCIYADA NCS
Hadafkeennu waa inaanu fulinno barnaamij bulsho isku dhafan oo labadaba ammaan ah oo la heli karo dhammaan dhalinyarada.
Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican ee aan ugu noolaan karno dhalinyarada leh baahiyo kala duwan, taasna waxaa loo sameeyaa kiis kiiskeed. Meesha ay dhalinyaradu ama waalidku u muujiyeen baahida caafimaad / taageero codsigooda, waxaanu samayn doonaa wadahadal xiriir la leh si aan u helno macluumaad dheeraad ah oo aan ula shaqeyno dhammaan dhinacyada ku lug leh xalka ugu fiican.
Waxaa naga go'an inaan sugno amniga ka qaybgalayaasha, shaqaalaha, iskaa wax u qabso iyo la-hawlgalayaasha inta lagu jiro barnaamijka. Waxaan la shaqeynaa la-hawlgalayaal khibrad sare leh, shaqaale si buuxda u tababaran oo u hoggaansamaan dhammaan sharciyada khuseeya. Waxaan sidoo kale uga baahanahay kaqaybgalayaasha in ay raacaan xeerka fudud ee dhaqanka.
Wada-hawlgalayaasha khibrad sare leh
Barnaamijkeena NCS waxaa la bixiyaa taageerada kooxo ka mid ah ururrada kuwaas oo wadajir u leeyihiin waayo-aragnimo weyn oo la shaqeeya dhalinyarada. Waxaan ku shaqeynaa taageerada golayaasha deegaanka iyo dugsiyada.
Shaqaalaha tababarka leh
Inta lagu jiro howlaha oo dhan, dhalinyarada waxaa weheliya macalimiin la taliyayaal ah ama tababarayaal, shaqaalahana ugu yaraa saamiga dhalinyarada waxay noqon doonaan 1: 7. Dhammaan waxqabadyada dibadda ee xarunta firfircoonida waxaa hogaaminaya macalimiin tayo leh oo buuxa. Koox kasta waxaa hogaaminaya hage joogto ah inta badan barnaamijka. Dhamaan shaqaalaha ayaa si taxadar leh loogu soo xushay, oo loo qoondeeyey, loona tababbaray dhammaan howlaha ay bixiyaan. Qof kasta oo ka shaqeeya Element ayaa looga baahan yahay inuu DBS ku hubiyo (hore loo yaqaan CRB).
Ku hoggaansanaanta dhammaan sharciyada khuseeya
Waxaan si buuxda ugu hoggaansameynaa dhammaan sharciyada khuseeya iyo, haddii ay habboon tahay, wadashaqeynadayada dibadda waxay ruqsad ka haystaan ​​Xeerarka Wax-ka-Bedelashada Sharciga ee Hagaajinta 2004. Annaga (ama lamaanahayaga) waxaan soo bandhignaa qiimeyno faahfaahsan oo ku saabsan dhammaan hawlaha. Dhammaan shaqaalaha waxaa loo tababaray inay aqoonsadaan, aqoonsadaan oo ay yareeyaan khatarta ka iman karta inta lagu jiro barnaamijka.
Mas'uuliyadaha ka qaybgalayaasha
NCS waxay dhammaantood ku saabsan tahay caqabadda iyo naftaada riixa. Waxaan rajeyneynaa balanqaadka, nafta iyo xamaasadda. Ka qaybqaatayaashu waxay mas'uul ka yihiin in ay raacaan xeerkeena code-yada ee hab-dhaqanka inta lagu jiro barnaamijka. Haddii ardaygu si dhab ah ama si joogta ah u jebiyo xeerkan anshaxa, markaa waxaan u baahannahay inaan ka codsano inay ka baxaan barnaamijka. Xaaladdan, qofka dhalinyarada ahi waa inuu ku noqdaa guriga.
Xeerka Ka Qayb-Qaadashada Qaybta
1. Raac xeerarka amaanka iyo sharciga
2. Kaliya ka tag goobta meeshiisa
3. Uma aadin qolalka ama guryaha dadka kale
4. Iska jir qolkaaga kadib 10.45pm
5. Ma jiraan khamri, maandooriye sharci darro ah
6. Xushmee oo ku dar dadka kale